Ny fampiharana 9 tsara indrindra hijerena fantsona karama 100% maimaim-poana | Androidsis
Ireo fampiharana 9 tsara indrindra hijerena fantsona karama 100% maimaimpoana
DaniPlay | 02/05/2021 20:42 | Fampiharana Android
Singa lehibe eo amin'ny fiainantsika ny fahitalavitra noho ny fahafahanao mandany ny atiny rehetra, na fahitalavitra nomerika na streaming. Noho ireo sehatra samihafa androany dia afaka mijery sarimihetsika, andiany iray, horonantsary fanadihadiana na sary miaina tsy mila fanelingelenana izahay ary misafidy à la carte.
Noho ny teknolojia sy ny fampiharana, mpampiasa an-tapitrisany no afaka mankafy fantsona rehetra tsy mila famoahana an'io serivisy io. Alao an-tsaina ny fijerena sarimihetsika amin'ny fotoana rehetra amin'ny findainao ary mampita ny signal amin'ny alàlan'ny mivantana amin'ny fahitalavitra mihitsy aza fa tsy mila tariby.
Androany izahay dia mampiseho ny fampiharana tsara indrindra hijerena ireo fantsom-bola voaloa 100% maimaimpoana izay ahafahana mahita karazana atiny rehetra, ao anatin'izany ny iray amin'ireo zavatra lany ankehitriny, izay fanatanjahantena amin'ny ankapobeny. Hiankina amin'ny olona ny zavatra ho hitany amin'io fotoana io amin'ny tsindry efijery vitsivitsy fotsiny.
3 Ianao TV Player
8 Mahatsiaro ny dragona
IPTV Extreme dia fantatra ho fampiharana Android hijerena fahitalavitra, izy io dia miasa amin'ny alàlan'ny lisitry ny fantsona amin'ny endrika m3u, fisie izay hanome torolàlana ho an'ireo mpampiasa ny fampielezam-peo mivantana. Ny lisitry ny fantsona dia hiova arakaraka ilay voafantina, misy maro ny azo ampiasaina ary miasa daholo androany.
Ny fampiharana dia mifanaraka amin'ny Chromecast an'i Google, manavao ny torolàlana TV, manoratra fandaharana amin'ny fotoana tena izy ary mifehy ny ray aman-dreny. Ho fanampin'izay, ny fampiharana dia manampy ny fahafahan'ny fampidinana ireo lisitra isaky ny lohahevitra, indrindra raha ny momba ny fanasokajiana azy ireo amin'ny sokajy.
Ny fitaovana IPTV Extreme no safidy tsara indrindra amin'ny ModBro, ankoatr'izay rehetra tsy dia sarotra loatra ny manampy ny lisitra m3u araka ny fahitana azy. Amin'ny maha-fampiharana maimaim-poana dia misy doka, na dia esorina ao amin'ny kinova aloa aza izy ireo mba handoavana isan-taona ny rindrambaiko.
Efa ela no lasa ivon-haino aman-jery tonga lafatra raha ny amin'ny filalaovana karazana atiny rehetra, ao anatin'izany ny playlists ivelany. Ny fampiasana ireo fanampiana dia ho hitanao ireo fantsona maimaim-poana sy karama na oviana na oviana ao amin'ny terminal anao ary avy eo miala.
Azo apetraka i Kodi ho fanampin'ny telefaona ao anaty TV Box miaraka amin'ny rafitra Android, fampiharana tonga lafatra amin'ny maha-mpilalao ny karazan-drakitra rehetra. Ny mpampiasa dia hampifanaraka ity fampiharana ity araka izay itiavany azy, satria azo ampiana misaraka ny fantsona, manaova lisitr'ireo tianao sy hetsika hafa.
Ilaina ny fampiharana Kodi raha te hahita ny atiny rehetra ianao, na amin'ny sarimihetsika, na andian-dahatsoratra, fanadihadiana na koa YouTube mivantana. Izy io dia iray amin'ireo be mpampiasa indrindra ankoatry ny fananana fampidinana mihoatra ny 10 tapitrisa ankehitriny amin'ny finday. Mora ny mametraka ny fantsona.
Izy io dia toy ny fampiharana roa hafa izay filalaovana filalaovana DTT maimaim-poana toy ireo sehatra fandoavam-bola fanta-daza. Miaraka amin'izany ianao dia ho afaka manao fanatanjahan-tena rehetra, sarimihetsika, andian-tantara, andian-jaza ary misy rakitra amin'ny tambajotram-pifandraisana.
Ianao TV Player dia mamela ny mpampiasa hitahiry ny atiny izay tianay ho hita any aoriana na ampiana izany amin'ny tianao indrindra hanana azy io foana. Ampio ny asan'ny chat hiresahana amin'ny namana sy olona izay hihaonantsika amin'ny resaka, fa hiankina amin'ilay olona afaka mamaly ny hafatra tsirairay avy.
Ny rindranasan You TV Player dia manana safidy afaka mandefa atiny amin'i Chromecast Google ary alefaso ny video amin'ny fahitalavitra. Izy io dia iray amin'ireo isa naoty tsara indrindra ivelan'ny Play Store nataon'ny olona an-tapitrisany izay nisintona ny fampiharana avy amin'ny tranokala ofisialiny.
misintona: Ianao TV Player
Miaraka amin'ny SU Player v1.2 isika dia afaka mijery izay atiny amin'ny fahitalavitra maimaim-poana, toy ny sarimihetsika, fanatanjahan-tena mivantana, tantara an-tsary, andian-tantara, anime ary fanadihadiana, ankoatry ny atiny hafa. Izy io dia mifanaraka amin'ny telefaona Android, takelaka, TV Box, Amazon Fire TV, Chromecast ary TV misy fidirana amin'ny apps.
Mila mandeha samirery ianao! hiasa, fitaovana miasa izay anohanan'ny rindrambaiko, noho izany dia ilaina ny miditra amin'ny pejy Facebook hanaovana ireo dingana. Avy eo dia mila misintona GAME OVER avy amin'ny Play Store ianao hahazoana ny tenimiafina (ao anatin'ny kiheba ONE) hiditra OWLY GO.
Amin'ny alàlan'ny OWLY GO! hanana fantsona an-jatony isika, baikoin'ny sokajy samihafa toa izao manaraka izao: Fialamboly, Sinema ary andiany, Kolontsaina, Ankizy, Premium, Mozika, Fanatanjahantena, Firenena, 24/7 ary ny farany dia ny manohana ny tetikasa noforonina. Aorian'ny fitsapana azy dia afaka milaza isika fa misy fampielezam-peo mahaliana maro.
marary mitsika: SU Player v1.2 | Owly GO!
Mandehana mitahiry Google websearch
Iray amin'ireo fampiharana par tsara indrindra, amin'ny 2021 dia manohy miasa toa ny tamin'ny 2020 izy misaotra ireo mpizara vonona. WisePlay dia mpilalao horonantsary mahavita mamaky lisitra m3U, raha hampiasa azy io dia mila mandika URL iray fotsiny ianao ary mametaka azy hanehoana ny lisitry ny fantsona.
Aorian'ny fanafarana azy dia ho hitanao ny fandefasana mivantana an'ireo izay ao anatin'io lisitra io izay ampiasaina hijerena ireo fantsona DTT sy karama maimaim-poana. WisePlay dia manana interface mazava sy tsotra, mahasoa amin'ny telefaona Android, fa misy amin'ny TV Box, PC ary Chromecast ihany koa.
Play ny karazan-tsary rehetra toy ny aac, avi, asf, amr, divx, flv, h264, hevc, m3u8, mkv, Mov, mp3, mp4, mpg, mts, ogg, rm, rmvb, ts, vp9 ary wmv, ary koa ny http, https, mms, rtmp na rtsp. Azo alaina ao amin'ny Play Store izy io ary manodidina ny 5 tapitrisa ny fisintomana. Amin'ny Espaniôla izy io ary mampiasa azy io amin'ny fanokanana fotoana kely ho azy.
Toy ny WisePlay dia mpilalao video izy ioManaiky lisitra ihany koa izy io ahafahanao mijery fantsona manerana an'izao tontolo izao tsy misy fetrany. Ny MX Player dia manao zana-kazo ho azy, ka izany no anjaran'ny maro amin'ireo mitady mpilalao horonantsary eo an-toerana na Internet.
Ny MX Player dia misy fantsom-pifandraisana mazava tsara amin'ny fahitana azy, izy io koa dia handefa ireo horonantsary anananao amin'ny findainao amin'izany fotoana izany. Mba hanampiana ny m3u na rohy hafa dia mandehana amin'ireo tsipika telo Avy amin'ny ankavia ambony, kitiho ny tambajotra eo an-toerana, kitiho ny bokotra "+" ary ampio ny anarana eo akaikin'ny mpizara, kitiho ny Connect ary hampiseho ireo fantsona rehetra.
Fampiharana tena fanta-daza ioKoa satria efa navotan'ny mpampiasa 500 tapitrisa eran'izao tontolo izao izy io, dia iray amin'ireo sarobidy indrindra ihany koa ho an'ireo safidy rehetra arosony. MX Player dia tonga lafatra amin'ny fijerena DTT ary mandoa fantsona miaraka amin'ny fitoviana amin'ny WisePlay.
Developer: MX Media (J2 taloha)
Izy io dia iray amin'ireo rindranasa izay nanatsara ny fotoana tamina fomba miavaka hampiditra lisitra iray manan-danja, baikoin'ny firenena samihafa. Any Espana dia vitsy ny fantsona, fa mampanantena kosa ny mpamorona fa hanavao tsindraindray.
Manampia fantsona DTT any amin'ny firenena sasany, na dia ny tsara indrindra aza dia ny lisitr'ireo karama feno, izany rehetra izany nefa tsy mila mitondra lisitra akory. Kraken TV dia iray amin'ireo safidy maro amin'ny Internet ary ny vesatry ny fandefasana mivantana dia mbola tsy matotra.
Ny mpampiasa dia afaka mamonjy ireo fantsona amin'ny tianao indrindra mahita ianao bebe kokoa fa manana azy io foana nefa tsy mila mitady tsirairay isaky ny firenena. Ny Kraken TV dia manana safidy hampiasaina amin'ny teny espaniola raha vao manokatra azy ianao, manampy dokam-barotra koa izy io hanohanana ny asan'ireo mpamorona.
misintona: Kraken tv
Mahatsiaro ny dragona
Safidy mitovy amin'ny Kodi, WisePlay ary MX Player izy io, dia mampiasa rohy ivelany hilalao votoaty mivantana, na dia mamaky ireo rakitra ao amin'ilay fitaovana aza izy io. Noho ny interface-ny dia toa minimalist izy io, saingy manatanteraka ny fiasa rehetra amin'ny fomba lavorary.
Ny Dragons Feel dia mila havaozina amin'ny kinova farany vao apetrakao, ho an'ity, omeo fampidinana mandeha ho azy avy eo dia tadiavo ireo lisitra misy. Mba hanaovana izany, kitiho ny "+" ary ampidiro ny iray amin'ireo maro azo alaina amin'ny Internet hahatonga azy io hameno ny lisitra.
Izy io dia mpilalao video mitovy amin'ny fampiharana IPTV, fa amin'ny fahafaha-milalao karazana rakitra rehetra amin'ny alàlan'ny fananana codecs ilaina. Ny Dragons Feel amin'izao fotoana izao dia tsy ao amin'ny Play Store ary milanja manodidina ny 32 megabytes hampiasana azy, tadidio ny hampandehanana ireo loharano tsy fantatra ho an'ny fametrahana azy.
misintona: Mahatsiaro ny dragona
Fampiharana iray izay tianay ny FreeFlix HQ, fampiharana izay mampivondrona ireo zava-baovao rehetra amin'ny resaka sinema, ankoatry ny fahafahany mijery fahitalavitra amin'ny fanafarana ny lisitry ny fantsona. Ankoatry ny sinema dia manana andian-tsarimihetsika, Anime ary ilay Live TV voalaza etsy ambony, izay anafarana ireo fantsona.
Raha te hanampy iray dia mila tsindrio fotsiny ny "Live TV", kitiho ny Add m3u File URL ary apetaho ilay rohy hampidinana ireo fahitalavitra rehetra. Izy io dia iray amin'ireo feno indrindra, ankoatry ny fandefasana haingana ny horonantsary rehetra. Amin'ny Espaniôla izy io ary mamela ny safidy hamonjy ireo fantsona tianao.
misintona: FreeFlix HQ
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Ireo fampiharana 9 tsara indrindra hijerena fantsona karama 100% maimaimpoana
Ahoana ny fanamboarana ny efijery findainao
Ny fampiharana andrana IQ 6 tsara indrindra ho an'ny Android